यौनजन्य रोगबाट बचाउने तुलसी सेवनका यस्ता छन् अरु चमत्कारिक फाइदाहरु – दैनिक नेपाल न्युज
यौनजन्य रोगबाट बचाउने तुलसी सेवनका यस्ता छन् अरु चमत्कारिक फाइदाहरु
प्रकाशित द्वारा: शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६
काठमाडौं । अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको घरमा धार्मिक हिसाबले राखिने गरिन्छ तुलसीको मठ । धार्मिक दृष्टिले पनि निकै महत्वपूर्ण मानिने तुलसी मानव स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ । तुलसीमा औषधिको गुण हुन्छ । दिनहुँ तुलसीको पात सेवन गरेमा केही बिरामीबाट बच्न सकिन्छ । तुलसी सेवनले निमोनिया लाग्नबाट बचाउँछ । यदि तपाईलाई चिसो लागेको छ भने पनि कफ निकाल्न सहयोग गर्छ । यसले छातीको दुखाई पनि कम गराउँछ ।
तुलसीको सेवनले ज्वरोको समस्या देखा पर्दैन । निमोनिया वा मलेरियाको ज्वरोमा तुलसी र मरिचको तीन दाना एक चम्चामा पानीमा घोलेर केहि दिन पिएमा त्यसले निकै फाइदा गर्छ । मुटु रोग भएका मानिसहरुले बिहान खाली पेटमा दुध र तुलसी सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ । घाउ खटिरा आउँदा पनि तुलसीले राम्रो काम गर्छ । घाउ भएको ठाउँमा तुलसीको पात र बेसारलाई मिसाएर लगाउँदा चाँडै निको हुन्छ ।
यसले मुखको दुर्गन्ध हटाउन सहयोग गर्छ । नियमित रुपमा बिहान तुलसीको पात खाएमा मुखको दुर्गन्ध हटाउँछ । यसको सेवनले शीघ्र स्खलन, स्वप्न दोष तथा यौनजन्य रोगबाट टाढा राख्न मदत गर्छ । यसका लागि तुलसीको पात, डाँठको रस आदिमा मह मिसाएर पिउनुपर्छ ।
किशोरी बलात्कार गर्नेलाई सात वर्षको जेल सजाय
मार्तडीमा बाजुरा क्याम्पस प्रमुखको राजीनामाको मागसहित अनिश्चितकालीन तालाबन्दी
काठमाडौँ । गाई नेपालको राष्ट्यि जनाबर हो । यसलाई हामीले भगवानको रुपमा पुजा गर्ने गरिन्छ र नेपाली परम्पराअनुसार गाईको दूध अमृतसमान मानिन्छ । यसको दुध पुजा पाठमा पनि प्रयोग गरिन्छ [...]
बिहेपछि महिलाहरुको हि’प र स्त’न किन बढ्छ ?
विशेषगरि बिहेपछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ। उनीहरुको बोलीचालीदेखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ। साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ। सामान्यतया अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र [...]
बिहान उठ्न गाह्रो हुन्छ ? सावधान रहनुस यी रोग लागेको हुन सक्छ
काठमाडौँ । के तपाईलाई बिहान उठ्न गाह्रो हुने अनि ढिलो सम्म सुत्ने बानी छ यदि त्यसो हो भने होसियार हुनुहोस् । यस्तो खालको बानीले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । के [...]
मासुबाट भन्दा तेब्बर प्रोटिन पाइने ७ खानेकुरा
अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रिसर्च अग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त अनसन्धानले देखाए अनुसार मासुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त [...]
मात्र दुई मिनेटमा यसरी चम्काउनुहोस् आफ्नो दाँत
हरेक मानिस आफ्नो प्रभाव अरुमा राम्रो परोस् भन्ने चाहन्छ । यसको लागि अन्य कुराजस्तै सफा र चम्किलो दाँतको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हन्छ । सेतो र चम्किलो दाँतसहितको तपाईको शक्तिशाली मुस्कानले [...]
के हजुर से’क्स पा’वर कम भएर आजित हुनुहुन्छ? अपनाउनु यि घरेलु तरिका…
काठमाडौं । मानिसहरु शि’घ्र व्रि’य प’तन, से’क्सपा’वर कमका कारण पारिवारिक सम्बन्धमा पनि चिसो पसेको पाइन्छ । तर तपाई हाम्रो गाउँ घरमा पाउन सकिने सेतो प्याजलाई मसिनो बनाई काटेर, गाईको ध्युमा [...]
आतकङ्कारी अक्रमणमा परी एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु